Silungiselela isisu seSuku saGourmet
Unyaka omtsha. "Iingcamango zengxaki," u-Olivier, uNapoleon, ubanda. Yinambitha, isondlo kunye ... eziqhelekileyo. Kodwa le holide iyimilingo engenakuqikelela. Ngoko ke, ngekhefu, silungiselela isisu seGourmet's Day! Ngaba awukwazi ukutyelela iYurophu yakudala? Musa ukuphelelwa lithemba! IYurophu ayiyi kuhamba naphi na, kodwa ngoku ungaphupha okufutshane malunga nayo. Ukuze unike amaphupha inambitheka yaseYurophu yangempela, zenzele umthendeleko we-cheese.
Ukuba ubusuku bube buvila , zizenzele ngesitya se-cheese ngewayini. Kodwa khumbula - zonke iintlobo zeeshizi zithanda "iwayini" kwaye kuyinqweneleka ukuba ungazixubeki. Iparmesan izonambitha kuphela iwayini ebomvu, njenge-cheddar. Ungaphuzi iwayini yaseSwitzerland (ngokuqhelekileyo, i-Swiss cheese ayithandi iwayini), kodwa iwayini elimhlophe liya kuba yinto ehle kakhulu kuyo nayiphi na ishizi esithambileyo enokusikwa kwi-cracker. Xa ulungiselela i-plate yeeshizi, khumbula ukuba i-brie ushizi kunye nesibhakabhaka esibhakabhaka idliwa ngesonka esinomnandi kunye namavayi, iipulole kunye neidiya. I-emmental, i ricotta kunye ne-parmesan ifanelekileyo iyenze nobusi, amakhiwane, isardadi kunye neengcezu zenyama yokubhema. I-Mozzarella iya kuhamba kakuhle kunye namagqabi e-arugula kunye ne-mustard, kunye ne-cheddar ebukhali, i-brie ne-camembert-kunye neminquma kunye ne-apricot jam.
Ukuba unendlela yokuphila enempilo (awukwazi ukusela iwayini, kodwa ungacingi ukuba unothile), unokwenza izithelo ze-caramel. Ngenxa yoko, nquma iipulo okanye iipereya kwiincinci ezinqamlekileyo. Ukucoca ngeshukela kunye nokukhawuleza kwesola kwioli (de kube kuvela isiraphu). Dlulisa iziqhamo ezitshisayo zegouda, uthele i-gravy kwaye ujabulele, ulungiselele isisu seGourmet day!
Ukukhetha isiselo esishisayo kwi-Gourmet Day , sichasene nobuncwane. I-motto yethu inhle kakhulu, ifihlakele kunye neenzuzo zezempilo.
Ukuba ungumthandi wewayini elimhlophe, gxuma ngeglasi yeziqhamo, ukutya kwezilwanyana zasendle okanye iinkukhu. Umgaqo osisiseko kukudibanisa ukukhanya kwesiselo kunye ne-snack. Kungenxa yoko akufanele uphuze iwayini elimhlophe, inhlanzi enamanqatha (i-trout okanye i-salmon).
Ukusela okuNyaka omNtsundu we-Traditional - i-champagne - idinga inkokhelo efanayo. Kungcono ukudibanisa ne dessert. Iibisiki, iziqhamo, iipesele ezikhanyayo, i-ayisikrimu - inhlanganisela enkulu kakhulu yeGourmet's Day! Ukuba uthanda i-cognac, khumbula ukuba olu liselo olunxilisayo lugqityiwe ngaphandle kokutya. Kodwa ekubeni i-brandy ifom ehlambulukileyo-isengowomntu, unokuyihlaziya ngokukhuselekileyo kunye nezinye iziphuzo. Ukukhetha kwethu kukuhlanganiswa kwekhofi kunye ne-cognac kunye ne-creamy whipped okanye i-brandy kunye netiyi nobisi. Isiselo esinjalo siza kudibanisa kakuhle kwincwadi enhle okanye intetho ephuma entliziyweni.
Olunye uhlobo oluthile lwesidlo lweGourmet's Day luyintando . Ewe, akulula, kodwa i-tshokoleta. Kwaye akudingeki ukuba uthenge iiyunithi ezibiza ukulungiselela - ungasebenzisa isigodlo esinamacwecwe okanye izitya zeeramic. Imeko ephambili - umlilo omncinci (ikhandlela elungileyo), ukuze umxube ungatshiswa. Kwi-100 ml yekhilimu elutywe, yongeza i-300 g yetshokolethi emnyama (iincinci ezincinci). Xa umxube uhamba ngokufanayo kwaye upholile, uthele kwi-20 ml ye-cognac. Ewe, ukungena kwi-tshokoleta ujonge ukuba unokwenza iziqhamo zeziqhamo, i-cookies, i-biscuits, i-marshmallows, izithelo ezomileyo-ngokufutshane, yonke into eyenziwa ngumphefumlo kaGourmet!
Kwakhona ngo-Eva onguNyaka omtsha, unokulungisa into enomnandi kwaye ingabi manqatha. Ngokomzekelo, uJulienne. Ukubunjwa kweJuni yeNdabuko kubandakanya i-cottage cheese, amakhowa, ushizi. Ngako oko, esi sidlo, nangona kunjalo, ngendlela, iya kuhambelana nomntu wonke othanda izitya ezintle kwaye azinzima kakhulu.
Ukuze uzive ukhululekile kwimini yokutya kwaye ungasondli isisu, ungadli inani elikhulu lokutya. Ukuba udla inyama - qi niseka ukuba uphuze kunye neziphuzo njengejusi.
IMvana kunye ne-feta kwi-grill
Isaladi enomnandi kakhulu kunye nama-squid-recipes kunye nezithombe zinyathelo-nge-nyathelo
Iindlela zokupheka ezona ziyancasa kwaye zisebenzisekayo, zokupheka kuzo zonke
I-recipe yesitya esitshisayo ebhodweni
Sushi: zokupheka kunye nezindlela zokulungiselela
Ukupheka kweSuku sikaValentine: izitya ezilula kunye nezolisayo
Yiyiphi imimiselo ekufuneka yenziwe ukuze kuqiniswe izikhwelo kunye noshicilelo
UVladimir Presnyakov noNataliya Podolskaya baba ngabazali
Ukwenza ukutya okumnandi kunye nokutya
Ukuxinezeleka: iindlela zokuphuma ekuxinezelekeni
Abathathi-nxaxheba abafayo beprojekthi "Dom-2". Iintlekele ezithandathu, iifoto neeVidi
I-Rice pudding Conde
Berry Berry kunye neBnut Biscuit
Iifatata eziselula kunye ne-tarragon yesibini
Izinkukhu Zokunakekela Inja
I-almond pie neerriesries
Umdala omnyama kunye nokusetyenziswa kwayo kumayeza omntu
Iiflanzi ezibomvu zibhaka kwi-foil
Umlomo okhuphayo: izizathu kunye nonyango